သင့်လက်တွင်းမှ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆန်းကြယ်သောမုဒြာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » သင့်လက်တွင်းမှ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆန်းကြယ်သောမုဒြာများ
သင့်လက်တွင်းမှ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆန်းကြယ်သောမုဒြာများ
Posted by မောင်ဘလိူင် on Aug 30, 2011 in Education, How To.. | 10 comments
မုဒြာများ ဧ။်အစွမ်းသည် သာမန်လူများအတွက် အလွန်ဆန်းကြယ်လှပေသည်။ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်
လက်မထိပ်နှင့်လက်ညှိုးထိပ်ကို ထိကပ်ပေးပြီးကျန်သောလက်ချောင်းများကိုဆန့် ထုတ်ထားပါ။
ဤမုဒြာသည် ဉာဏ်ပညာကိုထက်မြက်လာစေသည်။လက်မထိပ်တွင် ပီကျူထရီ နှင့် အင်ဒိုရင်းဂလင်းတို့ ၏ဗဟုချက်များရှိရာ ၎င်းတို့ ကိုလက်ညှိုးထိပ်ဖြင့်ထိကပ်ပေးသောအခါ ဂလင်းနှစ်ခုလုံးနိုးကြားပြီး လုပ်ငန်းစတင်သည်။
o မှတ်ဉာဏ်ကောင်း၍ ဦးနှောက် ထက်မြက်လာမည်။
o ပုံမှန်လေ့ကျင့်သွားလျင်စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ဒေါသမထိန်းနိုင်ခြင်း၊စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခြင်းစသော စိတ်ရောဂါများကို ကုသပေးနိုင်သည်။
လက်သူကြွယ်နှင့်လက်မထိပ်ကိုထိ၍ ကျန်လက်ချောင်းများကို ဆန့် ထားပါ။
လက်သန်းနှင့်လက်မထိပ်တို့ ကိုထိကပ်ပါ။ကျန်လက်များကိုဆန့် ထားပါ။
o ရေဓာတ်မျှတ၍ သွေးသားသန့် စင်စေသည်။
o အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း ၊ကြွက်သားများ ရှုံ့တွခြင်းတို့ ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
၄၅မိနစ်ကြာမျှလေ့ကျင့်လျင်ရောဂါပြင်းထန်မှုအလိုက်၁၂နာရီမှ၂၄နာရီအတွင်း သက်သာလာမည်။ပို၍သက်သာစေရန်၂လခန့် လေ့ကျင့်ပေးရမည်။
o ဒူလာ၊အဆစ်အမြစ်ရောင်၊ဂေါက်ရောဂါ၊ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ခြင်း၊သွက်ချာပါဒလိုက်ခြင်းစ သည့်ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေသည်။
o အစာအိမ်အချဉ်ဖောက်ခြင်းကို သက်သာစေသည်။
တစ်နေ့ လျှင်မိနစ်လေးဆယ်မှတစ်နာရီထိ နေ့ စဉ်ရောဂါပျောက်ကင်းသည်အထိလေ့ကျင့်နိုင်သည်။
o လေး ငါးမိနစ်အတွင်းနားကိုက်ခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
နေ့ စဉ် ၅မိနစ်မှ၁၅မိနစ်ထိ ၂ကြိမ်ခန့် လေ့ကျင့်ပါ။
o ကိုလက်စထရောကျစေပြီး ကိုယ်ရည်စစ်သွားစေသည်။
လက်သူကြွယ်နှင့်လက်သန်းတို့ ၏ထိပ်များနှင့်လက်မထိပ်ကိုထိပါ။ကျန်လက်ချောင်းများကိုဆန့် ထားပါ။
o ခုခံအားစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
o ဗိုက်တာမင်ချို့ တဲ့မှု နှင့်မောပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုပြေပျောက်စေသည်။
o ဆီးချိုရောဂါကို ထိန်းပေးနိုင်သည်။
o ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် လိပ်ခေါင်းရောဂါတို့ကိုကုသနိုင်သည်။
o ဆီးဝမ်းသွေးလေ မျှတစေသည်။
လက်ခလယ်နှင့်လက်သူကြွယ်တို့၏ထိပ်များနှင့်လက်မထိပ်ကိုထိ၍လက်ညှိုးကိုလက်မအခြေထိအောင် ကွေးညွတ်ထားပါ။ လက်သန်းကိုဆန့် ထားပါ။
နှလုံးအတွက် အကျိုးများစေသည်။နှလုံးရောဂါသက်သာစေရန် ဆေးထိုးသကဲ့သို့အာနိသင်ရှိသည်။ ၎င်းမုဒြာသည် Sorbitrate ဆေးပြား(နှလုံးတွင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်၍ရင်ဘတ်ပြင်းစွာအောင့်သော အချိန်တွင်အရေးပေါ်သုံးသောဆေး)ကဲ့သို့အစွမ်းထက်သည်။
နှစ်သက်သလိုလေ့ကျင့်နိုင်သည်။နှလုံးနှင့်သွေးတိုးရောဂါသည်များ တစ်နေ့လျှင်၂ကြိမ် ၁၅မိနစ်စီလေ့ကျင့်နိုင်ပါကပိုကောင်းသည်။
o နှလုံးသန်မာစေ၍နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။
o ဆီးဝမ်းသွေးလေ ညီညွတ်စေသည်။
o အစာအိမ်ရောင်ရမ်းသောပြဿနာများကို သက်သာစေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုမြင့်တက်လာစေသည်။နို့ ၊ထောပတ်၊ရေ နှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များသုံးဆောင်ပြီးမှ လေ့ကျင့်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
o ချွဲ သလိပ်ပျော်စေပြီး အဆုတ်အားကောင်းစေသည်။
o ပြင်းထန်သောအအေးမိခြင်း လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းစေသည်တို့ကိုကုသနိုင်သည်။
အကျိုးများစေ တဲ့ ပို့ စ်ပါပဲ ကိုဘလှိုင်ရေ
ဒီလို လက်ချောင်းလေး တွေ ကို လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမှာ
ကိုယ်ခန္ဓာ က ကော
ဘယ်လို ပုံစံ မျိုး နဲ့ နေရသလဲ ဆိုတာလေး
နံပါတ် ၁၀ လိင်္ဂမုဒြာ ကိုတော့
ရိန်းရဲ့ နင်ဂျာ အဆက်ဆင် ကားထဲ မှာ တွေ့ ဖူးသလို ပဲ
ဟုတ်ကဲ့ ..ကိုပေ လေ့လာချင်ရင်
တော်တော်နှံစပ်တဲ့ ကိုလေပွကြီး ပါလား။ကျေးဇူးနော် ကိုဘလှိုင်ရေ။လေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ်။
အဲ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ..
ဗဟုသုတအနေနဲ့ မှတ်သားရပါတယ် …. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ။
ဟုတ်ကဲ့ ကိုတော်ကာပြောတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။
လက်ချောင်းလေးတွေကစားတာနဲ့ ကျန်းမာရေးတွက် အထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာပဲဗျို့ ။ အလုပ်များနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘယ်ကိုမှသွားနေစရာ ၊ နေရာရှာနေစရာ မလိုပဲ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်တာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ် ။ ကျေးကျေး
ဟေ့လူ….. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်လဲပြောသေး……. ဘယ်ကိုကျေး မှာလဲ……..
အတွင်းအား တွေလဲ ရချင်ရလာမယ်နဲ့တူတယ်…….. ကျုပ်လဲ ကျင့်ပါမှ…….
တော်ကြာ နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ရင်ဖြင့်…ခက်တော့မှာပ…
ဒီပို့စ်လေးကို တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဘလှိုင် (ကိုဘလှိုင်လား ဦးဘလှိုင်လားတော့မသိ) ။ လက်ချောင်းလေးတွေကို လေ့ကျင့်ရုံနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အားတက်ပြီး ကော်ပီလုပ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်တွေလေးနေလို့ နံပါတ် ၅) သုညမုဒြာကို စမ်းကြည့်တာ ငါးမိနစ်လောက်ပဲရတယ် ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အတော်ထိသားပဲနော်၊ လွယ်လွယ်လေးထင်ရပြီး။
ဒီပို့စ်လေးကို တခြားမိတ်ဆွေတွေကို FW လုပ်ပေးချင်လို့ ခွင့်တောင်းတာပါ။ ကိုဘလှိုင်နာမည်ကော ဒီလင့်လေးကိုပါ ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မောင်ဘလှိုင်ပါ..ဦးဘလှိုင်ကတော့ ရှိရင်
အသက် ၁၁၈ နှစ်ပေါ့။ဒီအထဲက တစ်ချို့ မုဒြာတွေ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဖူးတယ်။
မဆိုးဘူးဗျ။ထိရောက်မှု ရှိတယ်။ ပထမတော့ စိတ်ထင်တာလား လို့တွေးမိသေးတယ်။
ပလာစီဘို အကျိုး(Placebo effect) လားပေါ့လေ။မေမြို့ ရတနာပုံ တယ်လီပို့သွားနေ
တုန်းက အဲဒီမှာ အရမ်းအေးတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်တာနဲ့ နံပါတ် ၁၀ လိင်္ဂ မုဒြာ ကိုထိုင်ပြီး
လေ့ကျင့်တော့ လူကတဖြေးဖြေးနွေးလာတာ သတိပြုမိတယ်။နောက်တော့ အေးလွန်းလို့ အိပ်မပျော်နိုင်ရင် အဲဒီလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးမှ အိပ်ပျော်တော့တာပဲ။ မူရင်းလင့်လေးပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခွင့်ြ့ပုရင် ရှယ်သွားပြီနော်။ လင့်လေးပါ ယူသွားပါတယ်။ နောက်လဲ ဒီလိုထူးဆန်းပြီး အကျူိးရှိမဲ့ ပို့စ်လေးတွေ တင်ပေးပါနော်။